Sunday July 29, 2018 - 09:34:19 in Wararka by Super Admin
Isagoo wareysi siinayay wargeyska Standard ee dalka Kenya ayaa guddoomiyaha Mandheera Cali Roba wuxuu ka sheekeeyay taxaddiga dhanka amniga ah ee ka jira deegaanada maamulkiisa iyo halista isaga shaqsi ahaan uu wajahayo.
Cali Roba ayay la yaab ku noqotay markii ugu horeysayba oo loo sheegay xafladda caleema saarkiisu ineysan ka dhici karin meel fagaare ah sababo ku aaddan cabsida xagga Ammaanka, waxaana ay taasi u aheyd billowga jawwi cusub oo ku dheehan walwal iyo cabsi.
Wareysigiisa wuxuu ku sheegay 3 jeer inuu ka badbaaday isku day dil oo kaga yimid dhanka Xarakada Mujaahidinta Al-Shabaab, isagoona xaqiijiyay qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo saraakiil Boolis ah iney ku nafwaayeen weerarro isaga lagu beegsaday.
"Nolol iyo Geeri waxaa haya ALLAH" ayuu ku qanciyay naftiisa si uu u wajaho halista xagga Ammaanka ee jirta.
Guddoomiye Cali Roba ayaa wali xusuusta kolonyadiisa oo 4 gaari ka koobneyd sidii uu qarax u qabsaday, halkaasna ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen asxaabtisa, walina wuxuu dareensan yahay in khatarta Al-Shabaab ay joogto tahay.
"Ammaanka Mandheera wuxuu u baahan yahay maareyn adag, marba haddii 100% maalin waliba aan filaneyno in weerar uu dhaco" ayuu yiri Roba.
Gobolka NFD ee Kenyaatigu ay xoogga ku heystaan ayaa ka mid ah meelaha masraxa u aha weerarrada Al-Shabaab, waxaana gobolka isaga barakacay inta badan dadkii Nasaarada ahaa oo ogaaday ineysan nabadgalyo ku heli karin deegaanada Muslimiinta.